व्यावसायिक मौरी पालन सम्बन्धी जानकारी र मह प्रसोधन गर्ने तरिका हेर्नुहोस् [ भिडियो ]  Hamrosandesh.com
व्यावसायिक मौरी पालन सम्बन्धी जानकारी र मह प्रसोधन गर्ने तरिका हेर्नुहोस् [ भिडियो ]
काठमाडौं,२ माघ ।
मौरी अन्य किराहरूमध्ये एक फाइदा जनक र धेरै संख्यामा रहने किरा हो । मौरी प्राचीन समय पालन गर्दैनथे भने पुरानो समयमा मौरीलाई काठको बाकस, काठको खोपा, काठको मुडा आदिमा राखेर पालन गर्थे यही शिलशिलामा आधुनिक तरिकाबाट निकाल्न मिल्ने चौकोस पे्रmम घारको आविष्कार भयो । मह मदानीको आविष्कार भएपछि मौरीलाई व्यवसायिक रूपमा पालन गरी फर्म खोलेर अहिले पालन गरिरहेका छन् ।
कस्ता जातका मौरी पाल्दा राम्रो हुन्छ ?
मेलीफेरा र सेराना जातका मौरी पालन गर्दा राम्रोसँग उत्पादन दिने गर्दछन् । मेलीफेरा जातको मौरीलाई तराई र भित्री मधेसमा पालन गर्न सकिन्छ भने सेराना जातको मौरीलाई उच्च पहाडी क्षेत्रमा पालन गर्न सकिन्छ ।
मौरीको घर र रेखदेख गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
पुष्प रस नपाउने समयमा मौरीलाई कृतिम आहारा वा अन्य ठाउँमा लागेर चरणको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
मौरीको घारबाट मह निकालेको अवस्थामा रानी मौरी फेरेको बेलामा घार समायोजन र विभाजन गरेको बेलामा कृतिम आहाराको कालो र गाँढा रङ्गको कपडा लगाउनु हुँदैन साथै बास्नादार तेल, सेन्त लगाउँनु पनि हुँदैन । घार खोल्दा वा हेरचाह गर्दा टाउँकोमा जाली टोपी र हातमा पञ्जा लगाउनु पर्दछ ।
घार खोल्दा गर्मी मौसममा बिहान ९ बजे देखि ११ बजे र दिउँसोमा २ देखि ४ बजेसम्म खोली सक्नुपर्दछ वा समय र मौसम अनुकुल छ छैन हेर्नु पर्दछ । घार खोल्दा जहिले पनि प्रवेशद्वारको विपरित दिशातर्फ बसेर खोल्ने गर्नुपर्दछ ।
घार कसरी तयार पर्ने ?
मौरीको आधुनिक घारको आविष्कार भएदेखि मौरी जात अनुसारको घार तयार पारिन्छ ।
ल्याँगस्ट्रथ घार, न्युटन ‘ए’, न्युटन ‘बी’, न्युटन ‘सी’
एपिस मेलिफेरा, एपिस सेराना
अधिराज्यभरका लागि तराईका लागि (सानो) मध्य पहाडका लागि (ठूलो), उच्च पहाडका लागि (वाक्लोफल्याक)
मौरी पालनको फाइदाहरू
> मौरीले बोट बिरुवाको वंश संरक्षण हुन्छ ।
> कम लगानीबाट पनि व्यवसाय सुरु गर्न सकिने र थोरै जग्गा वा मौरीको लागि बेग्लै जग्गा आवश्यक पर्दैन ।
> महको सेवन गर्नाले दीर्घजीवन र स्वाथ्यको लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ ।
> मौरीपालनबाट एउटा मह उत्पादन लिन सकिन्छ । अर्काेतर्फ कुटबाट पनि मैन उत्पादन वा अन्य श्रृंगारका सामग्री बनाउन सकिन्छ ।
> कम श्रम र शक्तिबाट पनि धेरै उत्पादन लिन सकिन्छ ।
> फूलको रस र परागको सदुपयोग हुन्छ ।
> रोजगारका अवसरमा वृद्धि हुन्छ ।
> सबै जातजाति र धर्मालम्बीहरूले मौरीपालन गर्न सकिन्छ ।
मह शुद्ध छ कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने ?
मह शुद्ध छ कि छैन भनेर थाहा पाउने विभिन्न तरिका छन् । शुद्ध महको थोपा पानीमा चुहाउँदा रेसा नबनी थपक्कै पिँधमा पुग्छ भन्ने गरिन्छ । त्यसैगरी सिक्कामा मह दलेर पछाडिबाट टुक्कीमा सेकाउँदा चिनी मिसाइएको मह बल्छ, शुद्ध महमा आगो लाग्दैन । त्यस्तै शुद्ध मह कुकुरलाई दियो भने खाँदैन भन्ने पुरानो मान्यता छ । तर, अचेलका कुकुरले जे पनि खान सक्छन् । अनुभवी मान्छेले मह शुद्ध छ कि छैन भन्ने चाखेर पनि सहजै थाहा पाउन सक्छन् ।
नेपालमा पाइने परम्परागतरूपमा पालिने गरेको मौरीको जात एप्पीस सेरेना हो । यो मौरी नेपालमा करिब एक लाख २५ हजार घार रहेको हुनमान गरिएको छ । व्यवसायिक रूपमा पालन गरिँदै आएको मौरी चाहिँ युरोपियन जातको हो । यो जातका मौरी नेपालमा लगभग ३५ हजार घार रहेको अनुमान छ । महको मूल्य पनि मौरीको जात अनुसार फरक–फरक हुनसक्छ । थोरै हुने भएकाले कठ्यौरीको मह जसले काढ्छ उसैले खाइहाल्छ । मह उत्पादन गर्न मौरीका विभिन्न जातमध्ये उज्यालोमा बस्ने र अँध्यारो बस्ने दुईवटा जात हुन्छन् । उज्यालोमा बस्नेसँग पनि रानी हुन्छ, तर त्यसलाई पाल्न सकिँदैन । अँध्यारोेमा बस्नेलाई मात्रै पाल्न सकिन्छ । कठ्यौरी, भीर मौरी र खागोले उज्यालोमा मह लगाउँछन् । भने अन्य मौरीले अँध्यारोमा मह लाउँछन् ।
नेपालमा उत्पादित मह नेपाललाई नै पुगिराखेको छैन । तर, नेपालमा मह उत्पादनको राम्रो सम्भावना छ । चिउरीको फूलबाट उत्पादन हुने महलाई विश्वमा अर्गानिक मह मानिन्छ । हाल नेपालमा वार्षिक १८ लाख किलो मात्रै मह उत्पादन भइरहेको छ । अहिले नेपालमा भारत र चीनबाट समेत महको आयात भइरहेको छ । महका विभिन्न परिकारहरू बनाइन्छ । मह, मौरी र मेनको महŒव पनि छुट्टाछुट्टै छ । विदेशमा मौरीको विष सङ्कलन गरेर औषधिको रूपमा समेत प्रयोग गर्न गरिएको पाइन्छ ।
विशेष गरी नशा सम्बन्धी रोगको नियन्त्रणका लागि मौरीको विष प्रयोग हुन्छ । मौरीको चाका वा मैन जुत्ताको पोलिस, मूर्तिहरूको धलौट लिपस्टिक, क्रिम आदिमा प्रयोग हुन्छ । मौरीको चाकाबाट मह निकालिसकेपछि त्यसलाई पेलेर पुनः चाका बनाउने ठाउँमा मौरीलाई राखिदिन सकिन्छ । त्यसो गरियो भने मौरीलाई चाका बनाउने सुरुदेखिको झन्झट गरिरहनु पर्दैन र छिटै मह उत्पादन गर्नसक्छ । मौरीलाई एकैठाउँमा राखेर पालिरहँदा धेरै मह लगाउन सक्दैन । त्यसैले मौरीका घारहरू मौसम अनुसार सारी राख्नुपर्छ ।
हेर्नुहोस् [ भिडियो ]